१. नोरिल्स्क, रुस
यो स्थानमा एकदमै चिसो हुने गर्दछ । जसकारण यसको तापक्रम वार्षिक माइनस १० डिग्री सेल्सियस रहन्छ । जाडोको समयमा यहाँको तापक्रम माइनस ५५ डिग्रीसम्म पुग्ने गर्दछ । यसका साथै यसै शहरमा प्रत्येक वर्ष दुई महिना सम्म अँधेरो रहिरहन्छ ।
२. सर्पहरुको द्वीप
ब्राजीलमा स्थित इलाहा दा क्युइमादा एक यस्तो द्वीप रहेको छ जुन सर्पद्वारा शासित छ । यसको पछाडिको रहस्य के रहेको छ, त्यो आजसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । यस द्वीपलाई सर्पहरुको द्वीप पनि भनिन्छ । यो विश्वका ती हजारौँ विषालु सर्पको घर हो जसको नाम रहेको छ, गोल्डन लांसहेड वाइपर । यहाँ हरेक तीन फिटको दुरीमा एकदेखि ५ सर्प सजिलै भेट्न सकिन्छ ।
३. सेन्टिनल द्वीप, अन्डमान
यो द्वीपमा आम सर्वसाधारणलाई प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ । भन्ने गरिन्छ यहाँ ३ सयदेखि ४ सय खतरनाक आदिवासीहरु बस्ने गर्दछन् । जसको विश्वमा अन्य कसैसँग सम्बन्ध नै रहेको छैन । ती मानिसहरु न त बाहिर नै आउँछन् न त बाहिरका मानिसहरुलाई त्यहाँ जान नै दिन्छन् ।
४ . दनाकिल मरुभुमी, इथियोपिया
सामान्यतया भन्ने गरिन्छ यो मरुभुमीको गर्मी पृथ्वीमा नर्कको आगोको महशुस गराउँछ । विश्वका विभिन्न ठाउँहरुमा कहिले गर्मी हुन्छ भने कहिले जाडो हुन्छ तर यो स्थानमा सँधै तापक्रम ४८ डिग्री सेल्सियसको आसपासमा रहन्छ । कहिलेकाहीँ त तापक्रम १४५ डिग्री सेल्सियस सम्म पुग्छ ।
५. डेथ भ्याली
यहाँको प्रमुख समस्या रहेको छ, त्यहाँको गर्मी । यहाँको तापक्रम १३० डिग्री सेल्सियस सम्म पुग्ने गर्दछ । जहाँ कसैको पनि मृत्यु हुनसक्छ । सन् १९१३ मा १३४.०६ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम मापन गरिएको थियो । यहाँ पानीको कुनै निशाना नै रहेको छैन । यसलाई विश्वकै सबैभन्दा गर्मी स्थानको रुपमा परिचित छ ।